Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba zikaHulumeni » I-UNWTO Ivimba I-Critical Press Emakethe Yezokuvakasha Yomhlaba
Ibhodi Yezokuvakasha yase-Afrika • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba zikaHulumeni • I-LGBTQ • emihlanganweni • Izindaba • Abantu • Ezokuvakasha • ezithrendayo Manje • Izindaba ze-UK Breaking • I-USA Izindaba Ezintsha • Wtn
Ukushicilela mahhala kuyisisekelo emphakathini wentando yeningi. Ifuna futhi isabalalise izindaba, ulwazi, imibono, ukuphawula, nemibono, futhi yenza labo abanegunya balandise. Abezindaba bahlinzeka ngenkundla yokuthi amazwi amaningi azwakale. Emazingeni kazwelonke, esifunda, nawendawo, ingumbheki womphakathi, isishoshovu, nomnakekeli kanye nothisha, umthokozisi, kanye nombhali wezindaba wamanje. Ngokusobala omashiqela besaba umgadli onjalo womphakathi, kanjalo noNobhala Jikelele we-UNWTO uZurab Pololikashvili.
I-UNWTO iyinhlangano esebenzisana neZizwe Ezihlangene engaphansi komthetho wamazwe ngamazwe.
Njengamanje, i-UNWTO inoNobhala Jikelele ongekho emthethweni ophethe inhlangano njengondlovukayiphikiswa. Ngokusho kwencazelo engokomthetho yommeli obambe iqhaza ekwakheni izinqubomgomo ze-UNWTO, u-SG Zurab Pololikashvilihe wabekwa kuphela ngokukhohlisa. Ukhetho lokuqala lwango-2018 akufanele lwaziwe.
UNobhala-Jikelele ukwazile ukugwema yonke imibuzo ebucayi yabezindaba selokhu athatha izintambo ngoJanuwari 1, 2018. Namuhla kube yisibonelo sokuthi i-UNWTO izohamba kude kangakanani ukuvala noma ubani ongavumelani noNobhala Jikelele.
Ingqungquthela yokuqala yongqongqoshe eWorld Travel Market selokhu kwaqubuka lolu bhubhane, yenzeke namuhla eLondon eWTM World Stage e-Excel Exhibition Center.
Njengenhlalayenza, ongqongqoshe bebehlangana ukudingida izindaba ezifanele kwiWorld Tourism Organisation kanye nesimo sale mboni. Njengoba kwakunjalo kusukela i-UNWTO yasungulwa njengenhlangano ye-UN, izintatheli zaziyingxenye yezethameli, kodwa zazingakwazi ukubuza imibuzo. Ngemva kwengxoxo yongqongqoshe, kwakuyisiko ukuba nesithangami sabezindaba.
Konke lokhu kwashintsha ngoJanuwari 1, 2018, lapho uZurab Pololikashvili ephethe ezokuvakasha emhlabeni.
Izingqungquthela zabezindaba emibukisweni emikhulu yezohwebo noma amathebula ongqongqoshe abancane awabange esabakhona. I-Zurab ivela kuphela kuma-op ezithombe futhi iyanyamalala.
Phakathi nayo yonke inhlekelele ye-COVID-19, uNobhala-Jikelele we-UNWTO ugweme yonke imithombo yezindaba ebucayi. Namuhla eLondon, uNobhala Jikelele uye kwelinye igxathu.
Ukuze agweme noma yimiphi impendulo noma imibuzo ebucayi, ubhale ngamabomu izintatheli ezibhalela izincwadi ezinjengalezi, eTurboNews.
Isizathu: eTurboNews ubegxeka uNobhala Jikelele.
Ukugwema umbono omubi kubaluleke nakakhulu namuhla, ngoba uZurab Pololikashvili usesikhathini sesibili, futhi ukukhethwa kwakhe kabusha kudinga ukuqinisekiswa yi-General Assembly eMadrid.
Njengoba iphumelele izincomo zehlandla lesibili nguMkhandlu oPhethe ngoJanuwari ngenxa yokukhwabanisa okunzima, ukwazile ukushintsha indawo ye-General Assembly yaba yiMadrid, kunikeza ithuba elicacile lokuthi uZurab aphinde aqinisekiswe ihlandla lesibili njenge-UNWTO Sercterary General. ekupheleni kwale nyanga. Imibuzo ebucayi ayimlungele.
Umhlangano wanamuhla wongqongqoshe e-WTM eLondon ubungomunye waleyo misebenzi ayihambela okokuqala kusukela ku-COVID. Bekudingeka abukeke kahle emasontweni ambalwa ngaphambi kokulalelwa kwecala lakhe, kodwa akakwazanga ukubhekana nabezindaba.
UMhlonishwa. UNajib Balala, uNobhala Wezokuvakasha eKenya, wenqatshelwe yi-UNWTO ngeledlule ngemuva kokumema uMhlangano Jikelele ozoba seKenya esikhundleni seMadrid.
UNgqongqoshe uBalala ubeseLondon namuhla ukuzothamela umhlangano wongqongqoshe. Utshelwe ukuthi azisekho izihlalo zongqongqoshe. Waphuma emcimbini ngemuva kwemizuzu engenile, etshela eTurboNews ummemezeli, uJuergen Steinmetz, owayelinde emnyango wokuphuma.
Zonke izintatheli ebezihambele i-WTM bezihlezi kulo mcimbi, ngaphandle eTurboNews imelwe nguJuergen Steinmetz. Wenziwa i-persona non grata, engavunyelwe ukungena esiqongweni.
eTurboNews unguzakwethu wezindaba osemthethweni we-World Travel Market, kodwa lokhu akwenzanga mehluko. eTurboNews usongelwe yisikhulu se-UN ngesikhathi sithatha i-video yalesi sigameko.
I-UNWTO ibonakala iphumelela ekugwemeni ukugxekwa ngabezindaba abajwayelekile.
I-CNN ngokwesibonelo inguzakwethu wemidiya osemthethweni ozuza izigidi zamadola okukhangisa ezindaweni zokuvakasha. I-CNN Task Group yasungulwa ne-UNWTO ngu-Anita Mendiratta, umeluleki ophezulu kaNobhala Jikelele. Inhloso ye-CNN Task Group ukuthengisa ukukhangisa. Leli qembu lasungulwa eminyakeni edlule, ekuqaleni nge eTurboNews njengozakwethu. futhi kwaba eTurboNews lokho okubone ukungqubuzana kwezintshisekelo futhi kwashiya iqembu kusele i-CNN, UNWTO, ICAO, ne-IATA.
UMarcelo Risi, ophethe ezokuxhumana ku-UNWTO, wenqabile ukukhuluma noSteinmetz. Ubonakale ebalekela lesi simo, ethi: “Juergen, ngimatasa.”
Lesi akusona nje isimo esibangela amahloni, kodwa kuwukwephulwa okusobala kwenkululeko yabezindaba kanye necala elicacile lokucwasa.
USteinmetz akamele nje kuphela eTurboNews, kodwa futhi unguSihlalo we Inethiwekhi Yezokuvakasha Yomhlaba, inhlangano yezokuvakasha yamazwe ngamazwe. USteinmetz uphinde abe yilungu lesigungu esiphezulu seBhodi Lezokuvakasha lase-Afrika.
Uzamile ukuxhumana nomhleli wengqungquthela yongqongqoshe, iWorld Travel and Tourism Council (WTTC), kodwa izikhulu ebezisemnyango zenqaba ukuthi isikhulu se-WTTC sikhulume naye, zathi azazi ukuthi iWTTC ithini. okwe.
Emhlanganweni omfushane ne-WTTC ngemuva komcimbi, abaholi baleyo nhlangano abazange baziswe ngokwenzekile.
Buka ividiyo ye-iPhone ebonisa isimo siqhubeka: